माओबादीलाई आफ्नु औकात नभुल्न चेतावनी दिदै एमालेले भन्यो कता बाट ५0 प्रतिशत भाग दिने ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
माओबादीलाई आफ्नु औकात नभुल्न चेतावनी दिदै एमालेले भन्यो कता बाट ५0 प्रतिशत भाग दिने ?
काठमाडौं – नेकपा एमालेले ५० प्रतिशतको बराबरीमा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुननसक्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वास पात्र सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ५०-५०को गणितमा एकता नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।
दुई दलबीचको एकता संयोजन समितिको बैठक मंगलबार राखिएको छ। संयोजन समितिले प्रतिवेदनमा सहमति हुन बाँकी देखिएको एकताको मिति, घोषणा प्रक्रिया, एकतामा सांगठनिक अनुपात, जनयुद्धबारेको विश्लेषणबारेमा निक्र्यौल गर्नुपर्नेछ।